ဆက်ဆံရေး: Pair ကို Bond စုံတွဲများ | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ဆက်ဆံရေး Pair ကို Bond စုံတွဲများ
လက်ထပ်ထိမ်းမြားသူ့ဟာသူနေတဲ့လူမှုရေးအရဒီဇိုင်းအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နိုင်သည်နေစဉ်, စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်ဖြစ်ဖို့အလိုဆန္ဒဇီဝဖြစ်ပါတယ်။ လိင်နှင့် Bond နှစ်ဦးစလုံးကသဘာဝဆုလာဘ်ဖြစ်ကြသည်။ လူသားတွေဟာဟုခေါ်တွင်နို့တိုက်သတ္တဝါများ၏ထက်နည်း 5% ၏အုပ်စု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း pair တစုံ bonders။ ဒါကငါတို့ SWAN ကဲ့သို့လူမှုရေးအရ monogamous ဖြစ်, အသက်အဘို့အမိတ်ကြကုန်အံ့သောဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံများကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့သားငယ်များဆောင်ခဲ့ခြင်းနှစ်ခုစောင့်ရှောက်သူများအဘို့အရှည်လျားအလုံအလောက်ရေရှည်ဘွန်းမှခွင့်ပြုပါ။ သို့သော် '' လူမှုရေးအရ monogamous '' ဖြစ်ခြင်း '' လိင် monogamous '' ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့တူညီသောမဟုတ်ပါဘူး။ '' အိမ်ကဝေး play '' ရန်သွေးဆောင်မှုသညျလူသားတို့အပါအဝင်အားလုံးနီးပါးနို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်လည်းမရှိ။ စာပေ၏ A ကောင်းဆုံးပြန်လည်သုံးသပ်ရရှိနိုင် ဒီမှာ.
အဆိုပါ ဆုလာဘ်စနစ်က ဤအ pair တစုံဘွန်းအဆောက်အဦများနှင့်အိပ်ကြ၏ရှိရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအစားအသောက်နှင့်ရေ၏အခြားသဘာဝကဆုလာဘ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမောင်းသောတူညီအဆောက်အဦဖြစ်ပါတယ်။ အရက်, နီကိုတင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးများကဲ့သို့လုပ်ငန်းများ၌သို့မဟုတ်အတုဆုလာဘ်လည်းတစ်ခုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်ဘယ်မှာဝမ်းနည်းစရာကြောင့်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ပျော်မွေ့ / ဆုလာဘ် system ကိုအပိုင်စီး။ တကယ်တော့ကိုကင်းနှင့်အရက်ကဲ့သို့အအတုဆုလာဘ်လိင်ထက် Euphoria ပီတိတစ်ခု ပို. ပင်ပြင်းထန်သောခံစားမှုထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ သုတေသီများ, သဘာဝအားဖြင့်ကရာဖြစ်ကြောင်းတိရိစ္ဆာန်များမှနှိုင်းယှဉ်, ထို pair တစုံ bonders တွေ့ရှိခဲ့စွဲဖို့ပိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖြစ်ကြောင်းပါပြီ။ ကျနော်တို့ကဒီချစ်ခြင်းမေတ္တာတည်မြဲအမှန်တကယ်ပြဿနာသည်အဘယ်ကြောင့်အောက်က Coolidge Effect အောက်မှာနောက်ပိုင်းတွင်တွေ့မြင်ပါလိမ့်မယ်။
ဘွန်းနှင့်ယုံကြည်မှုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ကျနော်တို့မကြာခဏထိုကဲ့သို့သော, ပွေ့ဖက်နမ်းရှုပ် caressing, entwining နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိခြင်းအားဖြင့်သောကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်မှတဆင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖော်ပြချင်ပါတယ်။ မေတ္တာရှင်ထိတွေ့ "ဟုအဆိုပါ Savage သားရဲ၏ soothes" နှင့်အလွန်အနာရောဂါငြိမ်းစရာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သဟဇာတမတ်ေတာရှိတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးနှင့်အတူစုံတွဲကတကယ်တော့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကုသ ဒဏ်ရာအပြီးပိုမြန်။ 'မေတ္တာ၌' ငါတို့ Romantic ဖြစ်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာစဉ်းစားခြင်းရှိမရှိသို့မဟုတ်ကုန်ကြမ်းစိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်တပ်မက်သောစိတ်အဖြစ်, ထိုခံစားချက်များကိုနှင့်စိတ်ခံစားမှုဦးနှောက်ထဲမှာအဓိကအားဖြင့်ကြုံတွေ့နေကြသည်။ ဒီတော့အဖြစ်ဝေးကျနော်တို့ဘယ်လိုဦးနှောက်အကျင့်ကိုကျင့်ပိုပြီးတသမတ်တည်းသဘာဝလမ်းအတွက်သူများအသက်ကိုတိုးမြှင့်စိတ်ခံစားမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီလိမ့်မယ်နိုင်ပါတယ်အဖြစ်သင်ယူသည်။
<< အချစ်ကြောင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒအဖြစ်ချစ်ခြင်း >>